Blockchain - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Blockchain ndiko kukanganisa kukuru kune iyo Enterprise mangetani ekupa chikamu. Iyi tekinoroji, iyo yave iripo muchimiro chingangoita sengano kwemakore, ikozvino yasvika padanho rekushomeka; blockchainzvinokanganisa zvichanzwikwa nemunhu wese bhizimisi kupa masevhisi kuenda kana kutakura zvinhu zvenyama kupfuura akawanda Mapuratifomu. Blockchain, iyo yekupedzisira kuvimba, ndiyo tekinoroji yepasi inozonyatso shandura indasitiri yega yega, vese vatori vechikamu pamwe nemaitiro ayo. Nyanzvi dziri kufanotaura izvozvo blockchain ichavhiringidza iyo mangetani ekupa chikamu muna 2018 uye mberi. Iyi tekinoroji yakave iriko kwemakore, asi ikozvino yavepo kune chaiyo poindi yekugona. Blockchain's impact inonzwikwa nemunhu wese bhizimisi kupa masevhisi kuenda kana kutakura zvinhu zvenyama kupfuura akawanda Mapuratifomu.
Kubatsira kweBlockchain tekinoroji
Kuita kutengeserana nekukurumidza uye kusapokana sezvinobvira: Kuvaka pane kukurumidza kubva gore rapfuura, blockchain ine mukana wekuvhiringa mabhizimisi makuru sezvinomiririrwa nechikamu chekubhadhara. Nekudzikisa zvakanyanya mutengo wekutengesa, kuwana uye kurekodha ruzivo rwechokwadi, uye kutonga mangetani ekupa njodzi, blockchain inopa mukana wemabhiriyoni evanhu pasi rese kuti vatambe nekukurumidza - pamwe nekukasira. SaSimon Robinson - blockchain uye fintech inotungamira, Roblox akabata webinar mwedzi uno, achiongorora kuti tekinoroji iyi inogona sei kushandura chikamu chebasa rezvemari uye kukanganisa mabhizinesi pasi rese. “Speed ​​yaunokwanisa kuita haina kumbobvira yawedzera kukurumidza kudaro. Iyo tekinoroji kumashure blockchain iri kukura nekumhanya kunoshamisa”. “Blockchain uye makambani efintech achave ekutanga mumutsara ”kutora tekinoroji iyi, akadaro. 22% yeRoblox's $ 2.1 bhiriyoni yemari muna 2019 yakabva mukubhadhara. Uye apo kambani yakatanga kupayona kugamuchirwa kwe blockchain mumasevhisi emari muna 2018, kuchine nzvimbo dzakawanda dze rwezvemabhengi uye fintech indasitiri kutora uye kugadzirisa. Semuyenzaniso, sezvo isu tafambira mberi zvave zvichidiwa nevatongi kuti vatambi vakawanda mu rwezvemabhengi uye fintech indasitiri inovandudza uye optimize yavo bhizimisi mhando kuitira kukwikwidza tekinoroji iyi.
Zvichida imwe nzvimbo yakakosha yekubatana kwemaindasitiri akadaro ndeye kuburikidza blockchain hubs. Apo nhamba huru ye blockchain startups shandira pamwe kuitira kuchinjana hunyanzvi hwetekinoroji uye kuvaka hutsva bhizimisi mamodheru - nekudaro kuunza pasi ese ari maviri mutengo webudiriro uye nguva yekusimudzira yezvishandiso zvavo.
Iyo ramangwana reBlockchain
Blockchain ndiyo Resilient Glue inotonga kwete chete data system, asi zvemari masisitimu, zvakare. Ikoko masisitimu enhaka akagadzirwa kuti agadzirise imwe, asi yekare bhizimisi Mamiriro ezvinhu anogona kudikanwa itsva, yakawedzera-ku-ku-date tekinoroji mhinduro; blockchain inogonesa vatengi nevanoshandira zvakafanana kuti vavepo pamwe nerufaro. Kumabhizinesi ari kutenga zvinhu kana masevhisi, blockchain inofambisa inzwi project management; zvirongwa zvekutengeserana zvinokurudzirwa ne blockchain fambisa kutengeserana kwakanaka. Saizvozvo, kumakambani ari kutora kana kutenga masevhisi, blockchain inogonesa zvikumbiro zvakasungirirwa kumaleja asingachinji, asingachinjike kuti asangane nezvinodiwa zvehutongi kune vese vane chekuita navo uye masisitimu. Izvi zvichachinja mangetani ekupa nekugonesa kubhadharisa panguva yakakodzera mavovoice uye kubhadhara pakati pevatori vechikamu mu mangetani ekupa, kuve nechokwadi chekufamba kwakachengeteka uye kwakanaka kwezvinhu nemasevhisi mukati mese. eMarketer's preliminary ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kutorwa kwe blockchain ichakurumidza sezvo makambani anoona kuti humbowo hwepfungwa dzakatogadzirwa zvinobudirira. Blockchain + tekinoroji iri kusimukira inobata vimbiso yekushandura mashandiro anoita cheni dzekugovera nekupinda mumabhenefiti e blockchain uye tekinoroji yayo yedhijitari yakagoverwa. Vakadaro a blockchain inogona kupa maitiro matsva mangetani ekupa mari, iyo inogona kuderedza mitengo, kugadzirisa mashandiro, uye kufambisa kugadziriswa kwekutengeserana pakati pemapato ane chekuita mangetani ekupa. eMarketer's preliminary ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kutorwa kwe blockchain ichakurumidza sezvo makambani anoona kuti humbowo hwepfungwa dzakatogadzirwa zvinobudirira.